Posted by zizawa ⋅ 19/06/2010 ⋅9Comments
ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ရယ်စရာ တစ်ခုတွေးမိတယ်။ ဗမာ pun ပေါ့။ ကိုဝတုတ်ရေးခဲ့တဲ့ ချေးထုပ်တွေ ယူအက်စ်မှာ ဘာ့ကြောင့်များလဲဆိုတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးက ချေးစားကြလို့ ဖြစ်မှာပဲလို့။ 😀 ယူအက်စ်မှာလည်း ဂျီဒီပီရဲ့ ၉၀%နီးပါးလို့ ကြားဖူးတယ်။
Posted by ပိုင် (Pi) | 19/06/2010, 14:36
ပိုင်ရေ။ Frankfurt စာအုပ်ကို ဘယ်သူမှ ဖတ်မယ်မထင်ဘူး။ ဖတ်လည်း အနည်းဆုံး ဆုံးအောင်ဖတ်မယ် မထင်ဘူး။ မဖတ်လည်း တနည်းတော့ ခပ်ကောင်းကောင်းပါ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ စာအုပ်ရဲ့ နောက်ဆုံးဝါကျက sincerity itself is bullshit တဲ့။ အဲဒါကိုသာ ဘလော့ထဲ ထည့်ရေးရင် ၀က်ဝက်ကိုကွဲမှာ…..
အအောင်မြင်ဆုံး ၀ါဒဖြန့်မှု (propaganda) ဆိုတာ ၀ါဒဖြန့်ခံရသူကို သူဟာ ၀ါဒဖြန့်မှုကနေ လုံးဝလွတ်ကင်းတယ်၊ တနည်းအားဖြင့် သူဟာ သတင်းအချက်အလက် လွတ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းမှာ နေနေသူလို့ ယုံကြည်သွားစေတဲ့ ၀ါဒဖြန့်မှုမျိုးဆိုပြီး ကြားဖူးတယ်။ ဒီအကြောင်းကို နောက် ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ၄ မှာ ရေးမလားလို့။
Posted by zizawa | 19/06/2010, 15:05
အစ်ကို တရုတ် ယွမ်ငွေ ကိစ္စလည်း ရေးပေးပါအုန်း။
Posted by KyarP | 19/06/2010, 23:11
Posted by zizawa | 20/06/2010, 10:33
Net Debt (% of GDP) Gross Debt (% of GDP)
Posted by zizawa | 20/06/2010, 10:57
Good posts bro, I am interested that kind of post. We can read and understand easily. Hoping for continuing.
Posted by pho la minn | 20/06/2010, 04:04
တရုတ်က သူ့ပိုက်ဆံကို float လုပ်မယ်လို့ စနေနေ့က ကြေငြာတယ် ပြောတယ်။
Posted by ပိုင် (Pi) | 20/06/2010, 15:38
တရုတ်ယွမ်ငွေအကြောင်း အဲလောက် စေ့စေ့ငင မသိတာ အမှန်ပဲအစ်ကို။ ဒီတလော သတင်းတွေမှာ တရုတ်အကြောင်း ကြိုကြားတွေ့နေရလို့ နားလည်း မလည်နိုင်လို့ မေးကြည့်တာပါ။ ဗြိတိန်အကြောင်းတော့ လိုက်မှီတော့တာ ကြာပါပြီ။အမှန်ပြောရရင် အင်္ဂလန်မှာ နေရတာ တနေ့တခြား ကျောမလုံတော့ဘူး။ သူ့အကြွေးနဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးအကြောင်းကြားရတာလည်း ရှေ့ရေး ရင်လေးစရာပါ။ ဗြိတိန်သတင်းထူးရင် ကြားချင်သေးတယ် အစ်ကိုရေ။
Posted by KyarP | 21/06/2010, 15:11
ဟုတ်တယ် မကြည်ပြာ… နက်ဖန် (အင်္ဂါနေ့မှာ) emergency budget ထွက်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒိဟာကို စောင့်နေတာ။ ယူကေက ကျလာတာ အရမ်းသိသာတယ်။ ကျောမလုံတာကတော့ ယူကေတင်မကဘူး။ တခြားဒေသတွေမှာ နေသူတွေလည်းပါတယ်။ အဆိုးမြင်စရာတွေ အများကြီးပဲ။ တကယ်ကိုအများကြီးပဲ။ နောင်ဆို ပစ္စည်းတွေ (ဘယ်ပစ္စည်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်) တကမ္ဘာလုံးမှာ ဈေးတွေတက်လာဖို့ ရှိတယ်။ ခုပဲကြည့်၊ တရုတ်က monetary policy ပြောင်းတာနဲ့ ရွှေဈေးက အမြင့်ဆုံး အမှတ်ကို ပြန်ရောက်လာတယ်။ ဆော်ဒီအာရေဗျကလည်း ရွှေတွေကို ကျိတ်ပြီးစုထားတာ မနေ့က စာရင်းမှာ နောက်ဆုံးတခေါက် ထုတ်ပြန်တာထက် နှစ်ဆလောက်များနေတယ်။
Posted by zizawa | 21/06/2010, 15:57